Afhayeenka Taliban oo baaq u diray reer Afghanistan kaddib markii uu Mareykanka ka baxay 20 sano ka dib. | Salaan Media
Afhayeenka Taliban oo baaq u diray reer Afghanistan kaddib markii uu Mareykanka ka baxay 20 sano ka dib.
Afhayeenka Taalibaan Zabihullah Mujahid, ayaa ku baaqay midnimo qaran ka dib markii ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanka ay ka baxeen Afghanistan 20 sano kaddib.
Wuxuu ku boorriyay dadka reer Afghanistan inay “ka gudbaan kala duwanaanshaha oo ay isu yimaadaan”, isagoo sheegay in beesha caalamku aysan taageeri doonin dalka haddii dadkiisu aysan midoobin.
Dowladda soo socota, ayuu sheegay inay matali doonto dhammaan dadka reer Afgaanistaan.
Wuxuu xusay arrimaha dhaqaalaha ee dalka Afghanistaan wuxuuna ugu baaqay dalalka kale inay maalgashi ku sameeyaan Afgaanistaan.
Wuxuu intaas ku daray in Taalibaan ay raadinayso “xiriir wanaagsan” oo ay la yeelato beesha caalamka ayna eegi doonaan inay “si is -dhexgal ah” u xalliyaan arrimaha.
Guddiga doorashooyinka ee Itoobiya oo shaaciyay in lagu celin doono diiwaangelinta codbixiyayaasha ee lix degmo
Guddiga doorashooyinka ee Itoobiya ayaa shaaciyay in lagu celin doono diiwaangelinta codbixiyayaasha ee lix degmo iyo laba maamul magaalo oo ka tirsan deegaanka Soomaalida.
Meelaha lagu celinayo waxaa kamid ah magaala madaxda deegaanka ee Jigjiga.
Xisbiyada mucaaradka ayaa horay cabasho ku aaddan hannaanka diiwaangelinta codbixiyayaasha ugu gudbiyay guddiga doorashada.
Wasiir ka tirsanaa dowladdii hore ee Afghanistaan oo si adag ula hadlay Taalibaan
aliban/Handout via ReutersCopyright: aliban/Handout via Reuters
Tan iyo markii ay Taliban dib ula wareegtay awoodda dalka Afghanistaan laba toddobaad ka hor, shaki ayaa jiray ku aaddan sida ay kooxdu isu beddeshay tan iyo markii ay xukunka waysay dabayaaqadii sagaashameeyadii.
Mascuud Andarabi, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee xukuumadda Afgaanistaan, ayaa BBC-da u sheegay in uu jiro kala fogaansho iyo hadallo ka yimid hoggaamiyeyaal magac weyn leh oo markii hore saldhigyo ku lahaa dibadda iyo dagaalyahanno dhulka joogay.
“Dhab ahaantii Taliban waxay isku dayi doontaa inay xoojiso gacan ku haynta balse … Taliban ma aha laba iyo tobankan ama shan iyo tobanka weji ee aan aragnay” intii lagu jiray wada wadahadaladdii ka dhacay Qatar, ayuu yiri. “Maya, waa khatar waana aragnay xasuuqii ka dhacay magaalooyin kala duwan, aad bay u adag tahay in mustaqbalka la isku niyad furnaado”.
Andarabi wuxuu intaas ku daray in Taliban ay tahay inay fuliso ballanqaadyadeeda haddii ay rabto inay samayso sharci loo hoggaansanyahay.
. “Haddii aadan xiriirkaaga u jarin (kooxaha argagaxisada), haddii aadan xirin argaggixisada iyo haddii aadan ilaalin guulaha labaatan sano iyo sidoo kale suurtagalnimada doorashada mustaqbalka, ma heli doontid (wax) fursad aqoonsi oo caalami ah ”. ayuu raaciyay.